Inona no bisikileta elektrika tsara indrindra amin'ny vola? - Elektrika
Tena > Elektrika > Mividy bisikileta elektrika - ahoana no hamahana
Mividy bisikileta elektrika - ahoana no hamahana
Inona no bisikileta elektrika tsara indrindra amin'ny vola?
ANCHEER 20MPHEbike:Tsara indrindraankapobenybisikileta elektrika
Ny ANCHEER 20MPHEbikemandresy mora foana amin'ny ankapobenybisikileta elektrika tsara indrindrany sokajy 2021. Ny marika dia nanjary haingana ho iray amin'ireo malaza indrindraebikempanamboatra eto amin'izao tontolo izao miaraka amina maodely voaorina tsara sy lafo vidy.
Hey ry zalahy, andao hiresaka momba ny e-bisikileta mora indrindra eny an-tsena izao. Hatramin'ny taona 2012, 191 tamin'ireo bisikiletako no efa norakofako ary mieritreritra aho fa izay zavatra ambanin'ny $ 1500 dia takatry. Tsy mbola norakofako ny bisikileta rehetra tafiditra tamin'ity sokajy ity ary novakiako ny hevitra ary mba ampahafantaro ahy ny hevitrao.
Angamba nisy zavatra tsy ampy nataoko ary afaka manara-maso an'io aho ary manarona azy amin'ny ho avy. Hanohy hanavao ity sokajy ity aho. Araho hatrany ity fantsona ity sy ny tranonkalako electricbikereview .com izay sokajiako ny zava-drehetra.
Raha eo ianao dia jereo ihany koa ireo forum, satria misy tompona tena manana bisikileta mihoatra ny andro vitsivitsy monja afaka mamela famerenana. Eo no nametrahan'izy ireo ny lahatsoratr'izy ireo sy ny sariny ary ny entany. Tena ilaina izany.
Ka andao ary handeha eo, dia holazaiko anao hoe inona avy ireo safidiko ambony. Ka ny RadCity aloha. Ity no safidiko Premium.
Mahafinaritra ilay bisikileta. Toy ny hoe apetraka tanteraka amin'ny fender. Izy io dia kodiarana manamarina puncture, sidewalls taratra, jiro anatiny ary tonga amin'ny ambaratonga roa sy ambaratonga avo io ary misy elanelana kely eo amin'ny roa tonta.
Ka raha olona mandefitra ianao na maniry frame henjana kokoa dia ho azonao ny ambaratonga avo. Ny vidiny mety dia eo amin'ny $ 1.500. Ny hany maharatsy an'ity bisikileta ity dia ny frein-kapila mekanika.
Ankehitriny dia mbola misy rotors 180 milimetatra ary ireo dia somary mora kokoa ny manitsy sy mihodina, fa mitaky herin'ny tanana bebe kokoa. Rad dia manao asa lehibe amin'ny mpivarotra. Manana laza tsara any Etazonia, Kanada ary iraisam-pirenena izy ireo.
Mety mahita fitarainana vitsivitsy amin'ny Internet momba ity bisikileta ity ianao, saingy heveriko fa satria mivarotra vokatra be dia be fotsiny izy ireo. Mpanentana amin'ny tranonkala tokoa i Rad, ary te-hangarahara momba izany aho, saingy ny orinasa ihany no asainako manao doka fa tena atokisako. Raha ny marina, ny raiko sy ny renikeliko dia samy manana RadRover, izay kodiaran'ny tavy, ary mivoaka amin'ny batery iray ihany koa izy ireo.
Noho izany dia azonao atao ny manova izany eo anelanelan'ny modely samihafa sy ny sandan'ny famarotana azy indray dia tsara matetika. Ho ahy dia toy ny sary lehibe kokoa eto izany. Mahazo vidiny lafo ianao, vokatra manankarena misy amin'ny karazany mitambatra karazana boaty miaraka amin'ny fanohanan'ny mpanjifa mahafinaritra ary manana vanona afaka manome sy manamboatra ireo bisikileta ho anao izy ireo izao.
Matetika ianao mividy an'ireny bisikileta mora vidy ireny amin'ny Internet dia miseho ao anaty boaty goavambe. Saingy miaraka amin'i Rad, manana safidy vitsivitsy hafa ianao hanatsarana ny traikefan'ny mpampiasa ary eny dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny fahitako azy. Manaraka izany ny bisikileta elektrika mora vidy indrindra ary mamitaka an'ity aho satria heveriko fa ny vidiny dia karazana nandehanako ho an'ny Model Y avy amin'ny Electric Bike Company.
Ankehitriny ny orinasan'ny bisikileta elektrika dia miorina ao Newport Beach. Mivarotra an-tserasera toa an'i Rad izy ireo, saingy tsy manana serivisy fanaterana finday ary tsy manana birao foibe any Eropa sy Canada. Saingy ny vokatra azon'izy ireo kely kokoa dia toy ny 1699 miampy 189 fandefasana, ny vokatr'izy ireo dia manana freins disc hidina.
Manana motera matanjaka be ianao. Manana ity sobika mangatsiaka ity ianao izay mifanaraka tsara amin'ny bateria, ka mahasoa azy kely kokoa. Nametraka karazana bateria teo amin'ilay frame aho.
Ary heveriko fa azonao atao ny mampitombo ny fahaizan'ity bateria ity amin'ny fampidirana harona koa. Ary ity orinasa ity dia handoko manokana ny zana-kazo, ny rims, ny harona, manana ny valiny azo averina ao aoriana izy ireo, izy ireo koa dia manana kodi-taratra azo porofoina amin'ny puncture ary jiro natsangana. Ireo bisikileta ireo dia mahafatifaty tsara raha ny hevitro ary ny orinasa dia manao asa tena tsara amin'ny fanohanan'ny mpanjifa Ka ho ahy dia handoa vola kely kokoa aho ho an'ny zavatra toy izao, indrindra raha ianao Okay amin'ny fijerin'ny sambo, hitaky fotoana toa mandeha tsara ity bisikileta ity.
manampy anao hihena ve ny mitaingina bisikileta
Manome anao izany hery izany, manana throttle ary koa pedal. Safidy tena tsara izany. Manaraka izany ny safidy mora vidy sy takatry ny saina, momba an'i Rad koa io.
Manana asa tena tsara izy ireo amin'ny fahazoana ireo isa vidiny ireo, ary vao namoaka modely vaovao antsoina hoe RadMission tamin'ny 999. Ka hafainganana ihany ity vokatra ity, tsy manana fitaovana enina toa ny maodely RadCity ary tena ny ankamaroan'ny bisikileta bisikilety hafa. . Ary somary mavesatra izy, mavesatra noho ny nantenaiko hafainganam-pandeha tokana, saingy manana fahaiza-milanja tsara izy ary mitovy ny bracket eo aloha mba hahafahanao manampy fonosana eo aloha.
Ny kojakoja rehetra dia azo ovaina, ao anatin'izany ny bateria eto, noho izany dia somary ambany noho ny ankamaroan'ny maodely ny bateria. Izany dia ampahany amin'ny fomba ahazoan'izy ireo ny loka ary hitazomana izany ho tsotra sy tsotra ho an'ny tokana tokana, manana mpampitohy rojo fampiatoana izy ireo izay tena tsara ary mbola manana ny lasantsy ary mbola manana kodiarana porofon-tànana azo antoka, ka manana iray mifangaro, salantsalany ianao haavo ary haavo avo iray ary koa loko enina samihafa. Mahafinaritra izany amin'ny bisikileta $ 1000.
Hijery vokatra ao amin'ny Amazon na Costco na Walmart aho ary toa, hey, $ 1.000 ary toa tsy maninona. Afaka mahita azy aho, afaka mikasika azy aho, fa ny kalitao kosa mazàna ho ambany kokoa. Raha ny zavatra niainako dia saika tsy misy ny fanohanan'ny mpanjifa.
Tena nojereko ireo bisikileta namidy tany Amazon ary rehefa azoko ny bisikileta, nosokafako, nojereko ary nalefako, tsy hita intsony amin'ny Internet ilay bisikileta ary tena tsy nisy izany ary tsy niseho intsony izy io. Ka toy ny hoe mividy an'ity vokatra ity ny olona ary miafara amin'ny fanary azy io ary manjavozavo toy izany satria mety haharitra ireto bisikileta ireto raha mikarakara azy ireo ianao. Ka amin'ny orinasa toa an'i Rad, izay ananan'izy ireo ity batterie tohana tsara ity, ananany ireo kojakoja tsara rehetra ireo ary manana laza tsara amin'ny Internet izy ireo, ho ahy ity dia toy ny tsara indrindra azonao atao hahazoana ny vidiny Enter the spa bisikileta herinaratra ce.
Manaraka izany ny bisikileta nanaovana doka amin'ity sokajy ity. Ka rehefa mandinika bisikileta elektrika aho dia tena manandrana tsy manaparitaka dokambarotra amin'ilay tranonkala ary manasa orinasa sasany izay heveriko fa manana vokatra tsara hampiroboroboana ny bisikiletany avy eo ambonin'ny sokajy mora vidy ary lazaiko eto izany fa mino an'ity vokatra ity koa aho , Heveriko fa tsara izany. Mazava ho azy fa avy amin'ny Rad Power Bikes, izany no RadRunner.
Ankehitriny dia misy amin'ny kinova mahazatra izay doka; dia tokana tokana, mitovy amin'ny RadMission. Ny zavatra tokana amin'ity bisikileta ity dia mitovy amin'ny bisikileta kely izy io, na antsoina hoe bisikileta ilaina. Somary ambany kely amin'ny tany izy, kodiarana kely kokoa, saingy mbola toy ireny kodiarana tavy matavy ireny raha ampitahaina amin'ny efatra santimetatra, izay manome anao fampiononana satria tsy manana fork mihantona ary mamela azy handeha eny an-dalana, angamba amin'ny lanezy ary fasika na lemaka tsotra fotsiny somary mora kokoa amin'ny alàlan'ny tany malefaka, toy ny ahitra, ny Super 73 isit dia manana safidy seza lava kokoa mba hahafahanao maka mpandeha amin'ny tsimatra, fa ny seza lehibe toa ny kapiteny dia eo amin'ny paingotra mipetaka ary midina ka mahazo fanitarana tongotra feno ianao ary manana fiaran-dalamby mahafinaritra sy mahafinaritra, ny jiro, ny kodiarana manaporofo ary ny fanohanana sy ny tamba-jotra ary izay rehetra noresahiko teo aloha ho an'i Rad.
Ka nahafinaritra ahy tokoa ny nahita ity bisikileta ity. Tamin'ny 1199, tsy mihoatra ny RadMission fotsiny izy io, nefa mamonjy anao vola kely raha oharina amin'ny sasany amin'ireo maodely RadCity, RadRover, na RadWagon. Ary tena nivoaka talohan'ny RadMission izy io.
Somary gaga ihany aho satria noheveriko ihany tamin'ny farany fa bisikileta tena lafo i Rad. Ary ho azy hanao zavatra tsy manam-paharoa sy mahasoa toa ny bisikileta enta-mavesatra kely dia nieritreritra aho fa zavatra manokana. Toy ny hoe milay be rehefa manana ity bisikileta ity ny olona.
Raha vonona handoa vola bebe kokoa ianao, dia azonao atao ny mahazo ny RadRunner Plus, izay manana fork fampiatoana izay misy ny fanavaozana maivana sy ny kitapon'ny mpandeha, miampy ny lalana fitaterana hafainganam-pandeha fito. Ho ahy dia mendrika ny vola ary nopetahako tao amin'ny tranokala koa izany. Okay ry zalahy, ny farany dia ny Honorable Mention ary mankany amin'ny Electra Townie 7D, izay midika hoe derailleur 7 hafainganam-pandeha.
Electra dia tompon'ny Trekand Trek dia iray amin'ireo mpanamboatra bisikileta telo lehibe Trek, Giant, ary Specialised, ary tsara homarihina fa ireo marika ireo dia manana fivarotana manerana an'i Etazonia sy firenena vitsivitsy hafa izay azonao atao ny mandeha ary manao fanitsiana azo ampiharina ary ampanjifaina ny fitsapana bisikileta. Ny sasantsasany amin'ireo zava-nisongadina dia ity loko ity izay misy loko fito samy hafa izay mangatsiatsiaka tokoa. Mankany amin'ny fonony rojo izy io.
Tsy ny fametrahana azy ihany. Na izany aza, tsy manana fender. Mila mandoa vola fanampiny ho azy ireo ianao ary avy eo tsy hosodokoina.
Tombony iray hafa koa ny fahazoana azy amin'ny ambaratonga avo sy famolavolana endriny feno, ny haben'ny endriny samihafa dia mety ho fomba lahy sy vavy, arakaraka ny karazan-tsafidy fidinao. Ny tena izy, rehefa mahazo ilay endriny mandroso ianao, dia miorim-paka kely kokoa. Midika izany fa ny batterie amin'ity bisikileta ity dia somary lavitra mankany aoriana ary tsara be.
Raha ny tokony ho izy dia tianao ho ambany ny lanja sy eo afovoany, ka varotra hafa izany. Fa azo esorina ny bateria mba hahafahanao mameno azy misaraka amin'ny bisikileta. Tsy misy lasantsy fa fanampiana pedal fotsiny.
Ny freins amin'ireo dia mekanika mifanohitra amin'ny hydraulic. Mila mampiasa tanjaka tanana bebe kokoa ianao ary tsy dia manintona manokana izy ireo, tsy manana mpanakana maotera ao anatiny. Ary izany dia satria mampiasa bisikileta metaly ity bisikileta ity fa tsy sensor «cadence» toy ny ankamaroan'ny hafa eto amin'ity lisitra ity.
Midika izany fa mamaly tsara ianao amin'ny fotoana hanombohanao mivezivezy. Saingy mila miasa mavitrika kokoa ianao ary izany dia anisan'ny manome elanelana tsara ho an'ity bisikileta ity, na dia manana bateria kely kokoa aza izy ireo, tsy mahazaka totohondry ny kodiarana, tsy manana tariby amoron-dalana hita taratra izy ireo ary ity bisikileta ity dia tsy tsy misy jiro. Ka mety hiafara amin'ny fandaniana mihoatra ny $ 1.500 ianao raha hampitaha amin'ireo bisikileta mpampiasa mivantana izay noresahinay teo aloha.
Nefa indray, afaka mandeha mankany amin'ny fivarotana ianao, afaka mahazo karazana fanitsiana ao ary avy eo manana olona hanampy anao ara-batana. Tsy mila miandry ny olona handefa zavatra etsy sy eroa ianao. Ka raha ny fahitako azy dia mbola safidy tsara be io.
Miankina amin'ny zavatra ilainao fotsiny izany. Eny ry havana, antenaiko fa nanampy anao izany. Ny sokajy mora vidy dia iray amin'ireo malaza indrindra amin'ny resaka fifamoivoizana ary azoko tsara hoe maninona raha afaka mahazo bisikileta haingana ianao raha tsy lafo izany.
Ary matetika ianao dia afaka mankafy ny bisikileta ary mety milamina sy milamina, raha angalarina dia tsy hahavery vola be. Farafaharatsiny mandalo ao an-tsaiko io, mazava ho azy, misy fotoana anaovana izany, angamba te-handoa vola bebe kokoa ianao amin'ny bisikileta an-tendrombohitra, bisikileta enta-mavesatra, na sokajy maromaro ananako ity lisitra ity ho an'ireo sokajy 11 voalohany ao amin'ny tranokala noforonina ary tadidio ny tsirairay amin'ireto hevitra ireto dia manana lahatsoratra 30 minitra ary ny statistika rehetra sy ny zava-drehetra lalina kokoa raha mahita zavatra tianao amin'ity lisitra ity ianao dia tsindrio ilay fitaovana fampitahana kely. Ampitahao amin'ny sasany amin'ireo safidy hafa amin'ity sy ireo sokajy hafa.
Ny tanjoko dia ny manampy anao hahita ny bisikileta mety. Tsapako fa lafo be ny vola ary tadiavinao haharitra izany ary izany no ezahako ampiana anao hanena kely azy, saingy tsy voasaroko ny zava-drehetra. Ka ampahafantaro ahy indray ireo hevitra, mety diso tanteraka aho.
Ary rehefa mahita olona mangataka bisikileta aho dia hiasa handrakotra an'io koa. Hiditra amin'ny halaliny lalina aho ary manantena hanampy anao. Tiako ianao.
Mendrika hahazo bisikileta elektrika ve ianao?
Amin'ny farany, anbisikileta elektrikaafaka mitsitsy vola anao. Mety misy vidiny fividianana ambony kokoa noho ny mahazatra raha oharina amin'ny nentim-paharazanabisikileta, na izany aza tsy zavatra azo antoka. Ankoatra ny fividianana voalohany,eBikessomary lafo ihany koa ny fikojakojana azy, indrindra raha ampitahaina amin'ny fiara sy môtô.27.11.2018
Fanontaniana, fanontaniana, fanontaniana. Mety zavatra iray ihany no dikan'izany, manontania EMBN. (Feo Techno) - Eny ary, ka andao hanomboka.
Manana fanontaniana tena tsara eto isika avy amin'i Joseph Rennick. Ary manana, salama ry zalahy, misy tsy azoko resena lahatra fa ny e-bisikileta no hoavin'ny bisikileta an-tendrombohitra. Azoko tsara ny lafiny rehetra amin'izany ary mitahiry ny fararako aho hividianako ny bisikileta voalohany.
Manana Santa Cruz Bronson 150 mil aho izao ary mitaingina andian-dehilahy isan-kerinandro. Na izany aza, mifanohitra amin'ny bisikileta e-izy rehetra ireo. Nohazavaiko ny tombo-tsoa rehetra amin'ny bisikileta e-bisikileta fa mbola tsy eken'izy ireo ihany.
Amin'ny faha-32 taonako dia izaho no faralahy ao amin'ilay vondrona. Eny, izaho irery. Rehefa mahazo ny bisikiletako voalohany aho, hanao ahoana ny dia amin'ny faran'ny herinandro miaraka amin'ireo ankizilahy? Azoko atao ny mandray ilay olitra, saingy matahotra aho fa handeha irery ary maniry bebe kokoa ny diako rehefa miverina eo amin'ny parking izahay.
Tsara ny torohevitra, miarahaba anao amin'ny lahatsoratra rehetra. - Whoa, izany dia tanteraka, fanontaniana mamirapiratra sy mamiratra izany. Heveriko fa taratry ny eritreritr'i.
Manohitra olona marobe eran'izao tontolo izao, toa anao, inona izany, ahoana no hiasa rehefa mitaingina ny vadinao ianao? - Eny - Ary heveriko fa ny tena zava-dehibe indrindra, Joseph, izany ve no lanjan'ny mpamily sa hafa? Ambaratonga fanatanjahan-tena, safidy samy hafa karazana samy manana ny heriny avokoa. Heveriko fa izay ho hitanao, mbola hiara-mitondra fiara amin'ireo namanao ianao fa mety hitondra fiara amin'ny alàlan'ny eco mode ianao - eny - angamba mitondra fiara ianao? raha tsy mandeha ny motera dia miankina daholo izany ary afaka mandeha bisikileta amin'ny ambaratonga telo samihafa ianao mba hanananao olona iray milaza fa 60 kilao no afaka mitaingina maody eco - eny - olona milanja 80 pounds dia mitaingina lalana , ary angamba olona antitra tsy dia salama loatra intsony no afaka mitaingina modely turbo. Ka misy tokoa ny manome sy mandray.
Saingy mieritreritra zavatra iray aho, hitako fa manana ahiahy kely ny pals ary mieritreritra aho fa io dia tena teboka milaza vao haingana tao amin'ny tranonkala iray malaza amin'ny bisikileta an-tendrombohitra rehefa natomboka ny tranokala Norco. Ara-tantara dia be ny fankahalana e-bisikileta eto amin'ity tranonkala ity. Saingy ny ampahany iray nilaza dia toa tsy dia misy ny fankahalana anti-e-bisikileta eo amin'ity tranonkala ity. - Azo antoka. - Ary misy hevitra tsara, ary nilaza ilay fanehoan-kevitra fa ny dingana fahafito amin'ny alahelo dia ny fanekena.
Ary heveriko fa tsy maintsy manao bisikileta e-bisikileta isika izao izay misy ny fanekena - azo antoka fa tiako izany - satria rehefa mankany Italia ianao dia mankany Frantsa, ary fantatrao fa mandroso e-bisikileta- Firenena. Ary tena mijery ny olona mitaingina e-bisikileta amin'ny fitsiriritana kely ny olona. - Azo antoka.
Na izany aza any Amerika na angamba any Angletera dia firenena mandroso e-bisikileta tsy dia mandroso izy ireo ary mbola miandry ny hahatratra aho eritreretiko - Eny tokoa, heveriko fa mety tsara ny hitondranao ny namanao ho toy ny andro demo. Avoahy izy rehetra ary andramo ny e-bisikileta. Fantatrao fa afaka manao akanjo miafina ianao - tsy voatery ho izy ireo rehefa mahamenatra azy ireo ny mitondra azy ireo, fa ento mody daholo ry zareo.
Andramo ny e-bisikileta - ary ho andevozin'izy ireo - ary ho andevozin'izy ireo ny hanao fanovana fotsiny ary afaka manatevin-daharana azy ireo ianao, asehoy azy ireo ny fahaizan'izy ireo manidina lavitra, mora izany.- Joseph, heveriko fa ny ny tena zava-dehibe dia ny tsy hahatongavanao, fantatrao, sa tsy izany? Mahatsapa ny faneren'ny namana. Aza avela hanakana anao tsy hanana e-bisikileta ny tsindry ataon'ny namana satria mahafinaritra be izany.- Azo antoka.- Mbola afaka manao fanatanjahan-tena tsara amin'izy ireo ianao ary manao hazakazaka bebe kokoa fotsiny.- Mazava ho azy, ny pals anao, izaho manome antoka anao izany .- Tsy maintsy mitaingina iray ianao.- Ie, ary afaka roa taona dia mitaingina bisikileta rehetra ianao, tsotra be izany.
Tsy azo ihodivirana, ry zalahy, mila fantatro ny fomba fametahana tsangambato misy ambany kokoa amin'ny alàlan'ny famindrana tariby anatiny amin'ny e-bisikileta mpiara-mianatra amiko, ny Cube Stereo Hybrid. Ny motera dia Bosch Performance CX. Toa mila esorinay ny motera ary apetrakao tsara amin'ny tariby ireo tariby, tianay ny fanampianao - eny, noho izany tsy fantatray manokana ilay bisikileta ary misy maodely vitsivitsy an'ny Cube Stereo.
Fa heveriko fa raha asa maotera io dia tsy asa lehibe. Ny tenako no nanao an'io. Heveriko fa nanao izany ianao.
Raha azo antoka ianao ao an-trano, esory mora foana ny motera.- Eny, asa 10 minitra.- Raha tsy izany dia ento any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ianao.
Tokony ho manam-pahalalana tsara ianao amin'ny fanesorana ny motera raha ilaina. Fa mazava ho azy fa misy safidy maro samihafa. Manana Wireless izy ireo avy any Magura.
Tsy misy afa-tsy mpampita hafatra sy mpandray eo amin'ny tsatokazo, hany ka tsy misy tariby mihitsy amin'ny bisikileta. Mazava ho azy fa azonao atao ny mametraka ilay fantsom-bokotra mipetaka eo ambanin'ny paositry ny seza. Miankina amin'ny fomban'ny fiara mitondra anao io. - Eny, misy safidy maro isan-karazany, fa eny.- Saingy hanome anao vaovao momba ny fanesorana motera Bosch dia asa tena tsotra izany.
Aza adino ny manapaka ny bateria alohan'ny anaovanao izany, tsy misy kodiarana aoriana na cranks mipetaka amin'ny toerany, heveriko ara-bakiteny fa visy telo io, aza adino rehefa mamoaka ny motera ianao, makà sary iray tena misy ireo tariby. Ka rehefa averinao amin'ny tariby mitete io dia ho fantatrao tsara hoe aiza no misy ny zava-drehetra. - Eny, tadidio fa raha manao ny tariby mitete ianao, andramo fotsiny fa aza manana kink henjana ao anatiny, ao anaty tariby, tazomy fotsiny ho an'ny hazakazaka tariby malefaka tsara - Tsotra, mora - Asa tsotra .
Nahazo an'io fanontaniana io tamin'i Bugboy 1520023 izahay, mpitaingina bisikileta an-tendrombohitra mahazatra ankehitriny. Namidin'izy ireo tamiko ny hevitry ny kilometatra sy ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiofanana amin'ny bisikileta. Azonao atao ve ny mizara bebe kokoa momba ny fampitahana ireo bisikileta ireo amin'ny bisikileta mahazatra any ambany? Sarotra ve ny mahazo ny lanjany fanampiny? Hisy ady kely kokoa sy moramora kokoa ho an'ny zoro Misaotra ny seho sy izay rehetra ataonao - Fanontaniana lehibe, Bugboy.
Eny, samy hafa izy ireo. Mazava ho azy fa miresaka kilao 19 ka hatramin'ny 24 kilao aho amin'ny bisikileta e-bisikileta raha oharina amin'ny bisikileta tsy E-bisikileta Ny zava-dehibe indrindra eto dia ny fihetsika entinao miaraka amin'ny bisikileta e, indrindra fa amin'ny miolakolaka dia mihaona kely aloha eo amin'ny bisikileta e raha ampitahaina amin'ny bisikileta tsy e-bisikileta. Fa ny fihazonana bisikileta e-bisikileta sy ny fitoniana bisikileta e-bisikileta dia tena tsy mampino.
Izao aho dia nanao fitsapana miverina amin'ny iray amin'ireo làlana fitsapana malaza eran'izao tontolo izao any Italia tamin'ny andiany mpandefa Canyon iray, Travel Bike Exterior 180 mil. Ary ny zavatra adala dia, rehefa nanao ity fitsapana ambadika ity aho dia resy lahatra fa ny bisikileta midina dia ho dimy ka hatramin'ny valo segondra haingana kokoa noho ilay bisikileta. Na izany aza, ny bisikiletako dia, ary tsy maintsy lazaiko anao fa tsy nety tsara ny fampiatoana.
Kely kely loatra ho ahy ilay kodiarana ary nesoriko mihitsy ny bisikileta nidina dimy segondra. Raha manontany tena ianao hoe ahoana ny fahatsapany, dia ho tsapanao fa ny hafainganam-pandehan'ny fivoahana dia haingana be kokoa noho ny amin'ny bisikileta tsy misy bisikileta miaraka amina bisikileta e, saingy milaza zavatra hafa kosa ny fotoana.- Eny, azo antoka.- Fa heveriko koa ianao.
Mety hahatsapa ianao fa mahazo reraka amin'ny sandry bebe kokoa amin'ny bisikileta tsy e-bisikileta raha ampitahaina amin'ny bisikileta e. Satria tsy dia misy loatra ny fiovana mavesatra amin'ny bisikileta e. Na miankina betsaka aminy izany, ity dia mieritreritra fa ny bisikiletanao no mety habe ary ahitsy ny fampiatoana ary izany rehetra izany.
Fa eny, jereo ny lahatsoratra nataonay tany Italia (mozika miakatra). . Eny fiezahana tsara Jamie.
Manana manam-pahaizana momba ny Stumpjumper 2008 aho izao, ary tato ho ato dia tsikaritro ny bisikileta namboarina tamin'ny fehikibo sy ny paingotra fa tsy rojo vy sy kasety, koa tokony hiandry ny fahamatoran'ity teknolojia ity ve aho? Moa ve matevina kokoa noho ny bisikiletan'ny vondrom-piarahamonina ny sprockets, ary nivadika? Heveriko fa tokony hanao izany hatrany ianao? - Azo antoka, mieritreritra aho fa miova haingana be ny teknolojia amin'izao fotoana izao, heveriko fa mila miditra an-tsambo fotsiny ianao. Atombohy amin'ity zavatra e-bisikileta ity, manomboka bug. Isan'andro isika mahita ny zavatra miova matetika, fa.- Mieritreritra aho fa hametraka ny fanontaniana momba ny fehikibo fehikibo heveriko fa mora kokoa amin'ny toetr'andro, vato, fotaka noho ny rojo ny mpamily fehikibo.- Eny.- Niresaka vao haingana tamin'ny injeniera mipetraka eo akaiky eo izay mampiasa fehikibo ary mazava ho azy fa manana bisikileta mitondra kodiarana izaho sy Nick, saingy mieritreritra aho fa amin'ny toe-javatra faran'izay mafy na ivelan'ny arabe any amin'ny ilantany avaratra dia mety ho tsara kokoa ianao raha mitondra kodiarana. -Eny.- Heveriko fa ny fomba niresahanao momba ny fehikibo fehikibo dia mety hidika izany oh.
B. dia mpamily fehikibo ao anaty motera Brose. Mila mazava eto raha miresaka ao anaty motera isika na ivelan'ny motera - eny, eny - ka eny mazava ho azy fa toy ny motera e-bisikileta rehetra no voaisy tombo-kase ary tsara ho ahy ny mieritreritra fa ny motera sasany dia 20 ka hatramin'ny 30.000 Mila no tsara. alohan'ny tokony hanavotanao na hiandrasana.
Kilometatra adala ireo. - Ie, azo antoka - tsy azoko an-tsaina izany, sa tsy izany? - Tsia, ary mieritreritra aho fa misy antony mazava mahatonga ny môtô sasany, indrindra ny zavatra tsy mandeha amin'ny lalana, mifikitra amin'ity kalesin'ny rojo ity. Fantatr'izy ireo fa andrana sy notsapaina izany.
Mieritreritra aho fa hahita fandrosoana amin'ny lafiny ilany isika, saingy mieritreritra aho fa hifandray hatrany ny rojo satroka, ho tarihin'ny rojo foana, na hafainganam-pandeha tokana miaraka amin'ny fitaovana mihidy - Jamie, ataovy - ataovy fotsiny - Ankehitriny izao no fotoana, ataovy fotsiny - Ie, miditra. Tsy hahita an'ity lamasinina ity ianao ary hanenina. - Mandehana fotsiny dia ataovy. - Eny, azontsika avy tamin'i Michael Towler ity.
Manana milalao herinaratra Rocky Mountain avy eo alohan'ny bisikileta aho. Toa mitranga eo amin'ny lalana midina izy io ary mihena hatrany amin'ny tampon'ny havoana sy ny vatolampy ary ny horonan-taratasy. Arakaraky ny halehibeazako no miharatsy azy.
Toa mitranga izany rehefa mamafa sy vaky mifanohitra amin'ny fiakarana, fidinana na fihodinana na berm ianao. Inona no tianao holazaina Steve? - Eny, araky ny voalazanao ao dia zahao ireo bolt fanasana anao. Hamarino raha mafy ny headset anao.
Mety ho zavatra avy any aoriana io; mety ho toy ny vodin-damosin'ny vodinao any aoriana. Ny tiako holazaina dia satria indraindray ny feo sy ny hovitrovitra dia afindra avy any aoriana mankany aloha ary indraindray avy eo aloha mankany aoriana. Ka tena sarotra ny mamaly an'io fanontaniana io.
Amiko dia toa misy zavatra malalaka amin'ny bisikileta - eny - mety ho ny moterainao izany, malalaka ny visy amin'ny motera. Mety ho vaky ny baiko mpitroka hataonao .- Azo antoka.- Tsy haiko, raha tsy mahita ny bisikileta dia saika tsy ho voavaly ity fanontaniana ity.- Eny, apetrako amin'ny tany ilay bisikileta, manao fitsapana kely mitete izany.
Jereo raha afaka maheno zavatra toy ny fandehanana mora be ianao na zavatra hafa. Atsofohy amin'ny frein izy io. Atsofohy amin'ny kodiarana aoriana.
Mety hisy ny tabataba rehefa malalaka ny entana.- Ny fanontaniako ho anao, Micheal, avelao aho hiverina, izany hoe miresaka ve isika rehefa mandeha ny motera sa rehefa rehefa freewheeling ianao amin'ny làlana? Eny, mifandraisa aminay. Ary mila atokanao raha olana mifandray amin'ny motera izany na olana amin'ny fahadiovam-pitondrantena alohan'ny hanombohantsika mamaha azy.
Manana Giant 2017 Full E aho ary niezaka ny hanafaingana ny fiakarana mihanika mialoha. Miakatra antsasaky ny fiakarako aho mandra-pahazoako miadana ary tsy mandeha ny motera.
Avy eo tsy manana fotoana hifohazana ianao. Izany ve dia mitranga amin'ny e-bisikileta rehetra? Ary nitranga tamintsika ve izany? - Tsia, heveriko fa toa misy olana amin'ny filaharanao amin'ity bisikileta ity. Ka mahazatra izany. - Tsy misy olana amin'ny bisikileta, olana aminy. - Olana aminy, eny, iray amin'ireo zavatra fahita mahazatra hitantsika ny mpitaingina moto tsy tena mamindra kitondro tsara, ao anaty fitaovana mety, mitazona ny motera mandeha, mahazaka tsara.
Tena mora ny manova ny fomba fampisehoana rehefa miady amin'ny havoana ianao. Ka alao antoka fa raha miakatra fatratra toa ny noresahinao teto tamin'ny lahatsoranao ianao dia mazava ho azy fa mila apetrakao amin'ny fitaovana voalohany. Raha mitazona ireo cranks ireo ianao dia ho fantatrao fa misy maotera maro toy izany izay mihodina.- Tsara ny hevitrao, mandefasa lahatsoratra iray aminao hanao io fiakarana io izahay dia azonay ravana izany ary ho hitantsika hoe inona ny olana.- Eny. - Eny, mandefasa lahatsoratra fotsiny aminay de faly izahay manampy anao amin'ny fananganana banky.
Andy Rebholz, tiako ny mitsambikina amin'ny bisikiletako an-tendrombohitra, saingy tiako ny fijerin'ireo bisikileta e-bisikileta vaovao eny ary tiako ilay izy. Mbola afaka lehibe ve izy ireo? Manaova fitsambikinana ary azonao atao ary mandray ny fanararaotana ianao raha diso izany? - Azonao ve, Steve? - Fantatrao ve, izaho no olona diso tanteraka nanontany. Saingy manana jumper bisikileta matanjaka be eo akaikiko aho - eny, heveriko fa ny e-bisikileta dia mihoatra ny fahafaha-manao ireo fitsambikinana lehibe ireo.
Somary tsy mitovy izy ireo, fa rehefa zatra azy ireo dia azonao atao ny mandefa ireo fitsambikinana goavana ireo. Ity dia lahatsoratra tsara iray avy amiko sy Sam Pilgrimat Wind Hill Bike Park, ny Doing the Adversity dia mampiseho fotsiny izay azonao atao amin'izany. Heveriko fa milamina kokoa amin'ny rivotra izy ireo noho ny bisikileta mahazatra.
Mety aleoko mitsambikina amin'ny bisikileta misy ahy toy izay mandeha bisikileta mahazatra raha averiko ny lanja.- Ka mandehana.- Ka mandehana.- Tsotra be izany.
Mitandrema fotsiny. Mandehana any amin'ny The Crazy Gibbon, hatraiza ny halaviranao amin'ny baterinao? Wow, tsara q uestion. Nandeha fitsangatsanganana an-tsehatra aho tato ho ato, ny iray tany Scotland antsoina hoe Into the Wild, ary ny iray tany Italia ihany koa, tamin'ny diany tany Ekosy dia naka bisikileta manokana an'ny Sonders Watt Hour aho ary azonay izany nanao dia iray manontolo tamin'ny bateria iray.
Tany Italia, nihanika vola be izahay. Ary nanana bateria marani-tsaina aho izay 500 watt ora. Tsy vitany izany.
Afaka naka iray hafa mora foana ianao satria momba an'io lehibe io fotsiny izy ireo, fa ny halavany, tsy afaka hamaly izany - eny, maro ireo antony samihafa any - miresaka momba ny safidin'ny kodiarana ianao. Miresaka ny lanjan'ny mpamily ianao. Miresaka ny maody itondranao azy ianao.
Miresaka momba ny toetr'andro izy ireo, miresaka momba ny toetr'andro aho.- Eny.- Matetika mahatratra 3000 metatra aho no mihanika ary mivoaka mandritra ny adiny roa.- Eny, izany no karazana zavatra antonony.
Ny tiako holazaina dia, amin'ny tranga faran'izay mafy, afaka mametaka ny bisikiletako aho mandritra ny adiny iray miaraka amin'ny fiakarana be dia be, fa kosa nanao lahatsoratra iray izay hitanao eto ambany. Nanao 100K tamin'ny batery aho fa tena mitandrina tsara amin'ny fitantanana anao, mamono azy ary mitondra fiara amin'ny eco, ary koa, fantatrao fa miankina amin'ny hatsaranao izany hoy i Steve. Betsaka ny singa. - Eny, toy ilay voalohany.
Io ilay izy, Chris, tamin'ny dia nankany Italia nandao antsika tokony tamin'ny 10 ora sy sasany maraina ary tsy tonga raha tsy tamin'ny enina maraina. Ka noho isika nirona nitaingina be dia be tamin'ny maody eco dia afaka manana andro mahafinaritra amin'ny bisikileta - eny, azo antoka fa amin'ny eco - andro lehibe io ka miankina - eny - Avy any amin'i Chris Peacock marina izany, te-hividy ny raiko e-bisikileta - manana Cannondale Jekyll aho. Ho vitako ve ny hanohy sa tokony hiadana ny raiko miandry ahy? - Azoko antoka izany.
Rehefa nahazo bisikileta voalohany aho dia nandeha niaraka tamin'ny raiko, 62 taona izy. Nitaingina bisikileta iray izy, nitaingina bisikileta bisikileta mahazatra ahy aho. Ary tsia, tsy afaka naharaka azy aho.
lalan'ny bisikileta mamelana
Na dia tsy mety toa ahy aza ny raiko, dia tsara kokoa noho ny raiko aho, fa na dia amin'ny endrika ara-tontolo iainana aza, heveriko fa miankina amin'ny hatsaranao izany - miankina amin'ny rainao ihany koa - Eny, mitondra fiara miaraka amina kapoaka eran-tany aho indraindray. mpitaingin-tsoavaly, ary hafainganam-pandeha amin'ny eco up izy, hanjavona fotsiny ianao. Miankina amin'ny hatsaranao sy ny fahaizanao mitondra fiara ary ny zava-drehetra izany rehetra izany, saingy mino aho fa raha nitondra aho dia afaka mitondra fiara. Nandeha bisikileta mahazatra niaraka tamin'ny raketa sy zavatra tao amin'ny maody eco aho - Eny, niaraka tamin'i Randy Wilderhab izay nandresy tamin'ny Mega Avalanche aho.
Nandeha niaraka tamin'ny motera izy. Nandeha tamin'ny maody lalana aho. Ary miara-mitondra fiara isika, miankina amin'izany, miankina.- Ie, izany no zavatra tsara momba azy ireo, sa tsy izany? Ny fanohanana dia azo havaozina ary ahena raha ilaina.
Saingy tiako ny hampiarahanareo roa amin'ny bisikileta e-hankafizako azy tanteraka, hoy aho. - Izay ihany, misaotra noho ny fanontanianao ry havana. Fipoahana tena izy any amin'ity herinandro ity.
Tianay indrindra ilay voalohany avy amin'i Joseph Ahoana raha toa ka afaka mifandray amin'ny pals izy, saingy eny. Fanontaniana lehibe vitsivitsy ary fikatsahana lehibe, ary norakofanay izany tamin'ny seho EMBN antsoina hoe Electrophobia izay herinandro vitsivitsy lasa izay satria nahazo valiny vitsivitsy avy amin'ireo olona any an'ala izahay izay manana ny ahiahinareo tokoa. Eny.- Mandritra izany fotoana izany, lahatsoratra maro hafa tsy mampiahiahy momba ny EMBN.
Misy traikefa nahafinaritra tany Italia izay nataontsika herinandro vitsivitsy lasa izay. Zahao ity. .- Nandeha tany amin'ilay vatolampy nisy ahy ihany koa aho ary nanao fiakarana ara-teknika sy nampatahotra indrindra i Steve.
Jereo tsara ity. - Ie. - Aza adino raha manana fanontaniana ianao dia avelao ushashtag manontany EMBN ao amin'ny boaty fanehoan-kevitra etsy ambany.
Omeo ankihibe izahay raha nahafinaritra anao ilay fampisehoana. Ary hahita anao amin'ny manaraka isika.
Fampiasam-bola tsara ve ny ebike?
Fiara syebikestsyfampiasam-bola, fitaovana na kilalao manala baraka amin'ny fampiasana azy ireo izy ireo, ny tena lanjan'izy ireo dia miankina betsaka amin'ny tontolo iainana sy ny asa eo am-pelatanany na ny fialam-boly tian'ilay tompony. Ka ohatra, raha mipetraka amin'ny làlambe ianao ary mandeha 20 kilaometatra hiasana isan'androebikemety tsy aLEHIBEFitaovana.02.17.2021
Misy zavatra dimy heveriko fa tokony ho fantatrao momba ny trosa fampandehanana hetra herinaratra federaly 30% ho avy. Ie, fotoana mety indrindra ho an'ny US Air Force, ny US Air Force. Tsy mbola ananantsika ny fampahalalana rehetra.
Izay ananantsika dia mifototra amin'ity fanambarana an-gazety eto ity, pejy roa ihany io. Azoko vakina ny andalana voalohany. Toy izao no vakiny: 'Androany, ny mpikambana ao amin'ny Kongresy Jimmy Panetta sy ny filohan'ny Caucus Mainty an'ny Kongresy Earl Blumenauer dia nandefa ny Kickstart fanentanana ho an'ny bisikileta elektrika ho an'ny tontolo iainana.
Izany dia midika hoe e-bisikileta. Smart. Mamporisika ny fampiasana bisikileta elektrika na e-bisikileta amin'ny alàlan'ny trosa fandoavan-ketra ho an'ny mpanjifa ny lalàna mifototra amin'ny halavirana, hafainganam-pandeha ary mora azon'izy ireo atao.
Mora izany! Ny bisikileta e-bisikileta dia hanampy amin'ny fanoloana ny dian'ny fiara sy ny fivezivezena ary ny fihenan'ny emissions CO2. Ny fampisondrotana lehibe indrindra azontsika atao dia ny famoahana CO2. Ary avy eo ity andininy lehibe eto ity dia rohy mankany amin'ny fandalinana iray momba azy io.
Ny ambin'ny fanambarana an-gazety dia teny nalaina avy tamin'ny fikambanana bisikileta manerana ny firenena manohana ny trosa haba 30%. Ity fanambarana an-gazety ity dia tsy manana nofo aman-karena betsaka, fa hizara ny fahalalantsika aho ary haminavina kely hoe hieritreritra aho na tena hitranga izany na tsia. Laharana voalohany.
Ary heveriko fa ny zava-dehibe indrindra dia ny fahazoana azy. Inona no atao hoe carte de tax federal? Raha mbola tsy nampiasa iray ianao taloha dia mety hanakorontana kely. Midika ve izany fa mahazo fihenam-bidy 30% amin'ny vidin'ny bisikileta ianao rehefa mividy azy? Tsia.
Ka izany no tokony ho fantatrao. Ahoana no hampiharanao na hanararaotanao an'io? Ankehitriny, rehefa manan-kery io dia efa nividy sy nanofa fiara elektrika sasany ary manana mari-ketra federaly izy ireo. Ka fantatro ny fomba fiasan'ny fizotr'ity.
Heveriko fa hitovy izany. Andao atao hoe manana bisikileta ianao izay mitentina 1.500 $. Hahazo 30% ianao ho toy ny trosa fandoavan-ketra.
Midika izany fa tsy maintsy mandoa ny vidin'ny antsinjarany feno amin'ny bisikileta ianao. Rehefa mividy azy ianao. Na izany aza, rehefa mametraka ny hetranao, amin'ny ankapobeny dia azonao atao ny milaza fa mety mila mameno endrika vaovao ianao.
Voalaza eto fa nividy bisikileta elektrika aho. Toy izao manaraka izao ny sandany, hahazo fihenam-bidy na trosa izahay rehefa mametraka ny hetranao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha mahazo famerenam-bola amin'ny taona ianao dia mahazo tamberim-bola avo kokoa noho ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra.
Raha mila mandoa haba ianao, dia esorina aminao ny ampahany kely amin'io faktiora io. Ka tsy mahazo trosa mivantana ianao rehefa mividy bisikileta, fa mahazo tombony kosa rehefa mametraka haba. Ka te hahalala aho raha hampiakatra ny varotra bisikileta amin'ny volana Desambra io.
Raha misy olona manandrana manapaka ny hetrany sy mieritreritra bisikileta iray ary izany dia mety hanosika azy ireo hivoaka alohan'ny faran'ny taona. Laharana faharoa: misy fetran'ny vola farany azonao averina. Ary 1.500 $ izany, izay be dia be.
Ka 30% na 1.500 $ izany. Mazava ho azy, tsy maintsy nanao matematika kely aho ary fantatro hoe inona ny tahan'ny fampisehoana vidiny tsara indrindra ho an'ny bisikileta elektrika. Raha mampiasa vola 24-set ianao izao dia hanolotra fanomezana kely aho.
Ka inona ny fanomezana? Raha omena io trosa io dia misy. Ka raha mividy bisikileta $ 5,000 ianao dia mandeha ny faktiora hanomezana anao ny trosa $ 1.500 feno. Hetezo ho 3 500 $ ny vidin'ny bisikileta aorian'ny fametrahana ny haba.
Tombam-bidy io raha ny fahitako azy raha toa ka mandeha izany. Ka ny tombondahiny tsara indrindra ho an'ny volanao dia bisikileta $ 5,000. Ary araraoty tanteraka ny trosan'ny haba.
Ary fahatelo, misy fetra ambony. Rehefa mandany izany vola be izany ianao, dia tsy mila trosa fampindram-ketra koa amin'ny ankapobeny. Ary izany ny satroka $ 8.000.
Ka raha mividy baomba miafina ianao dia 10.000 $ izany dia tsy manisa satria be loatra ny vola. Koa satria nolazaiko ny bisikileta miafina ary mihoatra ny fetra izany, voalaza fa mihatra amin'ny bisikileta manana herinaratra 750 watts na latsaka. 750 watt.
Laharana fahefatra. Misy andian-teny somary manjavozavo izay milaza fa mihatra amin'ny fidiram-bola ambany kokoa. Tsy voalaza hoe inona izany na inona no dikan'izany.
Ka mety misy karazana fidiram-bola tsy azonao araraotina. Ny hany lesoka hitako manokana dia ny 90% ka hatramin'ny 95% ny mpanjifako dia efa misotro ronono na efa misotro ronono. Ho afaka handray soa amin'izany ve izy ireo? Ambonin'ny zavatra rehetra: misy fetra fidiram-bola ve? Tsy haiko, fa tsy maintsy miandry isika hijery izay tena marina momba ilay volavolan-dalàna satria mbola tsy manana an'ity lahatsoratra ity isika.
Ary farany, laharana dimy, inona no tena hataony eo amin'ny tsenan'ny bisikileta? Efa misy ny tsy fahampiana. Efa manana olana amin'ny fahazoana ampahany sy faritra izahay. Ka raha misy ny fandrisihana hetra hividianana olona maro kokoa ve no hividy bisikileta mandeha amin'ny herinaratra? Ary hoy aho, eny, misy dikany tonga lafatra izany.
Misy fikambanana maromaro izay efa nanohana an'io volavolan-dalàna io talohan'ny nivoahan'ny fanambarana an-gazety. Mazava ho azy fa be ny fifanakalozan-kevitra tao ambadika. Nifandray taminao an-telefaona aho.
Nanandrana niantso ny sasany amin'ireo fikambanana tamin'ny lisitry ny nomeraon-telefaona aho. Mampalahelo fa tsy nisy niainga izy ireo ka tsy hitako izay pitsopitsony fanampiny. Na izany aza, heveriko fa tsy kisendrasendra fotsiny fa herinandro vitsy lasa izay, Rad Power dia nanangona vola mitentina 150 tapitrisa $.
Toa somary hafahafa ihany ny fahitako fa nisy volabe niditra tao amin'ny orinasa e-bisikileta lehibe. andro ara-bakiteny alohan'ny famoahana ny volan'ny hetra federaly naroso. Angamba tsy io no antony rehetra nahatonga an'io, saingy mety hitsaboana izany, heveriko fa hitranga izany? Ie.
Manana hevitra ve aho amin'ny fotoana hitrangan'izany? Tsisy fika. Raha te hividy e-bisikileta ianao dia hiteny zavatra mitovy amin'izany. Aza miandry.
Tsy hiandry aho satria be ny fangatahana. Ambany ny inventory ary hijanona ho fanamby amin'ny taona manaraka io. Ary vao mainka hihasarotra izany.
Nahita fanehoan-kevitra vitsivitsy avy amin'ny olona nilaza aho, maninona izahay no mampiditra fihenan'ny hetra 30% amin'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra nefa avy any Sina no tena izy? Tsy misy dikany izany. Izany dia toy ny famatsiam-bola amin'ny famokarana sinoa. Betsaka ny hevitra samy hafa momba ny hoe tsara na ratsy amin'ny ankapobeny.
Azoko lazaina fotsiny fa miasa tsikelikely sy mamolavola vokatra amerikana bebe kokoa izahay. USA! Etazonia hatrany! Nangataka izany tamin'ny alàlan'ny mailaka im-betsaka ary mbola tsy misy ao amin'ny fantsoko. Nefa maro aminareo no mety mieritreritra an'izany.
Manangana famokarana eto izahay. Ataonay eto amin'ny trano ao Bolton Ebikes izany. Ary raha vantany vao manangana famatsiana izahay, dia halefa ireo.
Bebe kokoa momba izany, tsy ho ela dia manana ny jack stanger amin'ny stock isika. Nandinika ity vokatra ity aho taloha. Misy drafitra ho an'ny kinova vaovao nohavaozina izay hanana lahatsoratra misaraka natao hanehoana fanavaozana anao.
Na izany aza, ity dia vokatra iray hafa izay natao tany Etazonia. Ary farany, nolazaiko ny iray amin'ireo bisikileta WartHog satria eo ambonin'ny rano izy ireo ary efa ho eto Etazonia. Raha mbola mitady bisikileta elektrika ianao dia aza hadino ny mijery ity lahatsoratra nosoratako ity, zavatra 10 tokony ho fantatra alohan'ny mividy e-bisikileta, satria mitohy mihatra hatrany ireo fampahalalana rehetra ireo.
Inona no tokony ho tadiaviko amin'ny bisikileta elektrika tsara?
Manome anao hevitra ankapobeny momba ny mety ho fari-piainana tena izy izy ireo. Aza adino ny mifantoka amin'ireo tena manavaka:tarehiny, herinaratra, elanelana, vidiny, karazana motera (pedal, pedal assist, herinaratra feno), lanja mavesatra indrindra, marika bateria ary valin'ny tontolo tena izy.Tsaravintana amin'ny anaoe-bisikiletamihaza!
(mozika namboarina upbeat) - Eto amin'ny The Verge dia tianay ny mandeha amin'ny herinaratra. Hoverboards, skateboards, scooter, moto, moped, unicycy, bisikileta, na inona na inona, dia nitaingenanay izy ireo. Fa eto aho hilaza aminao ny antony heveriko fa ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra manokana dia mihoatra ny teknolojia mahafinaritra fotsiny.
Heveriko fa mety ho lamin'ny fitaterana izy ireo. Saingy midika izany fa be dia be ny olona any ary tsy te-ho adala amin'ny e-bisikileta ianao. (mozika namboarina ambany) Mazava ho azy fa tsy vaovao ny e-bisikileta.
Efa am-polony taona maro izy ireo no tao. Ary raha mipetraka any Shina na any Eropa ianao dia tsara ny filokana fa efa fomba fiaina ny e-bisikileta. Any Eropa, ohatra, ny e-bisikileta dia efa nanampy ny olon-dehibe efa zokiolona hihazona ny fahaleovan-tenany ary izao dia lasa safidy mety amin'ny fipoahan'ny zandriny kokoa.
Saingy eto Etazonia, ny e-bisikileta dia mbola mari-pahaizana ihany. 4% ihany no azony amin'ny varotra bisikileta. Ampitahao amin'ny firenena tia bisikileta toa an'i Netherlands, izay amidy bisikileta e kokoa noho ny bisikileta mahazatra.
Amin'ny ankapobeny, ny manam-pahaizana dia maminavina fa ny varotra manerantany dia hahatratra US $ 23,8 miliara amin'ny 2025. Saingy mivezivezy tsimoramora ny Amerikanina.
Ny varotra bisikileta herinaratra any Etazonia dia nitombo avo valo heny nanomboka tamin'ny taona 2014. Ela ny ela vao tonga tamin'izany fotoana izany ary ny patanty voalohany tamin'ny bisikileta elektrika dia napetraky ny mpamorona antsoina hoe Ogden Bolton tamin'ny 1895. Eny, tsy nanao na nivarotra ny bisikiletany akory i Bolton, fa ny nahagaga, ny sasany amin'ireo antsipirian'ny endriny mitovy dia hita amin'ny e-bisikileta ankehitriny.
Môtô afara aoriana misy batterie miorina eo afovoany. Fantatro izao ny hevitrao. Inona no resahina hoy izy? Môtô afovoany, amps ary volts.
Tsy te ho maika aho. Andao àry hiresaka ny pitsopitsony alohan'ny hidirantsika amin'ny antony mahatonga ny e-bisikileta ho avin'ny fitaterana. (mozika fandihizana upbeat) Ka amin'ny ankapobeny, ny e-bisikileta dia bisikileta misy fanampiana mandeha amin'ny herin'ny batery izay tonga rehefa mandeha ianao na amin'ny tranga sasany dia mampandeha maotera kely ny pedal izay manome tosika anao rehefa miakatra na mihoatra ny havoana ianao Mitsangantsangana amin'ny tany mikitoantoana, tsy mila miasa mafy ianao.
Ny famadihana throttle dia manao zavatra mitovy ihany, fa tsy misy pedal. Misy karazana motera roa mifantoka amin'ny bisikileta matetika eo anelanelan'ny pedal roa. Ary avy eo ao ny motera hub, izay eo afovoan'ny kodiarana aloha na aoriana.
Samy manana ny tombony sy ny fatiantoka ireo karazana motera roa, mora vidy ary mahomby kokoa. Tena motera tena izy ireo ho an'izay mila e-bisikileta azo itokisana mandritra ny fotoana lava sy fivezivezena matetika. Ny kapila afovoany mazàna dia kely kokoa, maivana ary afaka manome tsela bebe kokoa noho ny hub hub, ka mahatonga azy ireo ho tsara ho an'ny faritra be havoana sy hampiasaina eny ivelan'ny arabe.
Ny toerana misy anao eo afovoan'ny bisikileta dia ahafahana mitaingina mandanjalanja kokoa ihany koa. Ary ny fanovana kodiarana amin'ny bisikileta antonony dia matetika tsy maharary. Ny bisikileta e-bisikileta koa dia mirona hampiasa karazana sensor isan-karazany mba hamaritana ny fomba tsara hizarana herinaratra.
Misy karazany roa, sensor torque ary sensor cadence. Ireo sensor Torque dia mifehy ny môtô mifototra amin'ny halaviran'ny bisikiletanao, raha toa ka miankina amin'ny hafaingam-pandehananao ny pedal. Ny bisikileta tsara dia mampiasa sensor torque, raha ny cadres ambany ihany no mampiasa cadence ary bisikileta maro no mampiasa ny roa, tena mamporisika anao hizaha karazana motera roa alohan'ny hividianana e-bisikileta hijerena izay mety indrindra aminao.
blender ambony 2018
Eritrereto ny fomba tianao hampiasa ny bisikileta; mandehandeha, mandeha an-dalambe, mitety? Ireo marika e-bisikileta tsara kokoa dia matetika mifanitsy amin'ny fametrahana maotera mifanaraka amin'ny karazana bisikileta amidiny. Ny ankamaroan'ny bisikileta an-tendrombohitra dia misy motera afovoany, raha ny ankamaroan'ny bisikileta mpandeha amin'ny havoana Amsterdam dia miorina amin'ny hub. ♪ Hitan'izy ireo mihodinkodina aho ‡
Matetika ny mpanamboatra dia manolotra fampahalalana fampisehoana noho ny antony maro. Hatramin'izao, ny fanisana herinaratra dia fomba iray handihizan'ireo mpanamboatra bisikileta ny lalàna henjana momba ny fanafarana any Eropa, izay mihoatra ny 250 watt avokoa. Saingy izao dia mamela ny bisikileta misy motera matanjaka be dia be kokoa ny kaontinanta, izay tsara satria ny bisikileta dia azo jerena ho fomba azo isolo ny fiara, tsy raharahiana.
Raha te hanana hevitra tsara kokoa momba ny hery lehibe mety ho tsapanao ianao dia zahao raha tanisan'izy ireo ny volts sy ny amps. Ampitomboy ireto roa ireto hahazoana ny ora watt, na ny isan'ireo watts azo atolotra ao anatin'ny adiny iray. Izany dia manome anao hevitra tsara momba ny halaviran'ny azonao.
Ohatra, ny bisikileta mitondra entana tena tsara avy amin'ny Rad Power Bikes, ny RadWagon, dia manana bateria 48 volt sy 14 ora ampere. 48 heny 14 dia mitovy amin'ny 672 watt ora. Raha mitandrina amin'ny herinao ianao, ny kilaometatra rehetra ataonao dia 20 ora eo ho eo no laninao.
Noho izany, miaraka amina fonosana 672 watt-hour, mahazo manodidina ny 34 kilaometatra ianao. (mozika elektronika kely) Eny, andao hiresaka kilasy. Misy kilasy e-bisikileta telo ao amin'ny US Class voalohany ny fanampiana pedal ary tsy misy t hrottle.
Ny kilasy faharoa dia mampihetsi-po fa miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 32 mph. Ao amin'ny kilasy fahatelo dia tsy misy afa-tsy ny fanampiana an-tongotra, tsy misy entona, fa ny hafainganam-pandeha 45 kilaometatra isan'ora. Roa ihany ny kilasy any Eropa; ny kilasy voalohany, izay malaza indrindra, dia manana hafainganam-pandeha 25 kilometatra isan'ora tsy misy aroloha.
Ny kilasy faharoa dia 1000 watts miampy motera afaka mandeha 45 kilometatra isan'ora, mitaky aroloha ary tsy afaka mandeha amin'ny lalan'ny bisikileta. Môtô ireo amin'ny ankapobeny, ka aiza no hividianana bisikileta? Ny fivarotana bisikileta eo an-toerana no tena filanao tsara indrindra, mahazo safidy ianao arahin'ireo tompona ary ny olona miasa any dia hamaly avokoa ny fanontanianao. Amazon dia toerana hafa, mazava ho azy, saingy misy ny varotra matotra tsara tokony hodinihina.
Mety ho tapaka ny bisikiletanao. Ary ireo orinasa mivarotra e-bisikileta any Amazon dia somary vetivety ihany, eto indray andro, lasa ny ampitso. Mazava ho azy fa tsy i Amazon ihany.
Ny ankamaroan'ny e-bisikileta amidy any Etazonia dia vita amin'ny faritra mahazatra vita any Shina izay ahitanao ny katalaogna. Ary raha mora izany, dia satria izy io. Manampy amin'ny fanazavana ny antony isian'ny orinasa bisikileta an'arivony tapitrisa ao amin'ny Kickstarter sy Indiegogoting miezaka manaitra anao amin'ny endrik'izy ireo mahaliana sy ny teknolojia futuristic.
Betsaka no tsy manana antoka na tsy misy fanohanan'ny mpanjifa. Ary tena azo inoana fa mividy maodely sinoa vao avy nomena anarana ho an'ny marketing any andrefana ianao ary lasa marika. Rehefa mahita e-bisikileta tianao ianao, fitsapana mahaliana iray dia ny fizahana ny fizotran'ny bisikileta Alibaba, hahitana raha misy zavatra mitovy amidy any Azia.
Mety ho mora kokoa aza. Eny ary, noho izany dia nampanantena aho fa hanazava ny antony heveriko fa ny e-bisikileta no ho avin'ny fitaterana. Ka andao ary.
Voalohany, mampihena ny sakana amin'ny bisikileta izy io. Ka rehefa olon-dehibe ianao na tratry ny fahasahiranana amin'ny bisikileta dia midina ny sakana ary mora kokoa ny manamarina ny mandeha bisikileta ary mitaingina fotsiny, dia azo inoana kokoa fa hivoaka ny fiaranao na ny Uber -Delete anao ny fampiharana rehefa fantatrao fa ho tonga amin'ny toerana alehanao ianao nefa tsy hatsembohana na adin-tsaina. Ary raha manahy ny amin'ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra ianao amin'ny famoahana ny fahafinaretana amin'ny bisikileta rehetra, dia tsy mety izany.
Ny fandalinana ny fientanam-po sy ara-psikolojika vokarin'ny bisikileta eny ivelany dia nahitana valiny mitovy amin'ny e-bisikileta sy bisikileta nentim-paharazana. Andao lazaina fa naharesy anao ny fiovan'ny toetrandro. Ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia maharitra kokoa noho ny fiara elektrika, mahatonga ny tanànantsika ho azo honenana kokoa, ary hanampy azy ireo hanadio ny fitohanan'ny fifamoivoizana.
Rehefa mihalehibe ireo tanànantsika, dia mivadika e-bisikileta ny orinasa sasany hanatanterahana ny fandefasana azy ireo. Domino's Pizza dia nanambara vao haingana fa hampiasa Rad Power Bikes izy ireo hanaterana pizza any amin'ny tanàna sasany. UPS dia mampiasa bisikileta mpitondra entana.
Ny orinasam-panaterana alemà DPD dia hampiasa ireto kamiaobe tena tsara tarehy ireto, izay bisikileta vita amin'ny e-bisikileta. Ny bisikileta e-bisikileta dia manova ny fomba fiasan'ny orinasa. (mozika manaitaitra maivana) Ka ny ampitson'iny dia nandeha bisikileta handeha hiasa aho ary nisy zavatra miavaka nitranga.
Voalohany indrindra, tsy novonoina aho, izay fahagagana kely tany an-tanàna izay mahafaty olona bisikileta toa an'i New York, fa ny tena zava-dehibe dia tonga haingana tany amin'ny birao aho, haingana be kokoa noho ny nandehanako ny metro ary tsy korontana sy trotraka be aho rehefa tonga. Saika izany dia ny bisikileta e-bisikileta rehetra ampiasaina amin'ny fivarotana enta-mavesatra, ary nahatonga ahy hieritreritra ny halaviran'ny Etazonia any ambadik'izao tontolo izao amin'ny resaka bisikileta. Mahita azy ireo ho toy ny fialan-tsasatra fotsiny izy ireo fa tsy fomba fitaterana.
Zavatra azo ampiasaina amin'ny toetr'andro tsara fa tsy amin'ny orana sy lanezy, azon'ny Holandey. Fa andao, ny ekipa vehivavy amerikana no nandresy azy ireo tamin'ny fiadiana ny amboara eran-tany. Afaka mifaninana amin'ny lasely koa isika.
Natao ho an'ny fiara ny arabentsika ary ny mpandeha an-tongotra sy ny bisikileta dia raharaha madinidinika ihany. Fa ny e-bisikileta dia afaka manokatra tontolo iray manontolo, indrindra ho an'ireo olona manana fahaiza-manao samihafa. Jereo fa tsy hamaha ny zava-drehetra izy ireo, fa afaka manome toky aho fa rehefa manomboka mitaingina fiara ianao dia tsy te hijanona intsony.
Nahita ilay teny ve isika? Teny tena izy ve io, azo esorina? Toy ny sakafo atoandro io, fa ianao no mitondra azy. (mihomehy) Inona no mahatsikaiky an'io zavatra io? (Hums engine) - Mety ho haingana be izany.
Mandoa vola ve ny bisikileta elektrika rehefa mandeha bisikileta ianao?
Tsy ny rehetraBisikileta elektrikaRecharge MandritraPedaling
Na dia misy azabisikileta elektrikadiaanjara-raharahany tenany rahamandeha tongotra ianao, tsy hanao izany ny ankamaroany.Azatsy famoizam-po anefa! nybisikileta elektrikamety ho maodely mamerina mamerina ny tenany rehefamandeha tongotra ianao.
Manana fanatanjahan-tena tsara amin'ny bisikileta elektrika ve ianao?
Ny fanadihadiana, izay nahitana mpitaingina vaovaodia-bisikileta, nahita fa ny ankamaroany dia afaka nahavita ny fivelaran'izy ireo haingana kokoa ary tsy dia nandramana loatrae-bisikiletanoho ny fenitrabisikileta, raha mampiakatra ny fiseonain'izy ireo sy ny tahan'ny fony ho ampymahazomisy dikanymikotrana.21 2021.
Ny bisikileta elektrika ve mendrika an'i Quora?
Azo antoka fa mahavita tsara kokoa noho ny frein mekanika mahazatra izy ireo. Ny singa sasany ampiasaina amin'ny T3 dia tsy fahita firy na dia amin'ny premium non-elektrikatsingerina. Tsara izanybisikiletana dia tsy misy an'io azaMAHAVONONA-drive singa ary izay no tena itiavako an'ity vokatra ity.
Mendrika ve ny scooter elektrika?
Manana anscooter elektrikamazava fa fitaovana fitateram-bola mahomby. Fa ny tombony azo amin'ny fananana dia mihoatra ny toekarena.Skuter elektrikamety tsy hisolo fiara ho an'ny dia lavitra: Unagi, ohatra, dia manana halavirana hatramin'ny 15.5 kilaometatra amin'ny fiampangana tokana.
Tsara ve ny bisikileta elektrika ho an'ny vao manomboka?
Mitaingina anE bisikiletakoa dia fomba tsara hanatsarana ny fitaizanao. Tombontsoa iray hafa an'nyBisikileta E ho an'ny vao manombokano lanja fanampiny omen'izy ireo. Mety hieritreritra ianao fa ny lanjany fanampiny dia mahatonga nybisikiletasarotra kokoa ny mitaingina, fa tsia, manampy fitoniana. Ny fihazonana fanampiny sy ny lanjany fanampiny dia manampy amin'ny dia matoky sy manome aingam-panahy.21.01.2020
Mila fitaovana amin'ny bisikileta elektrika ve aho?
AzaianareoMila GearsHO AN'NYNy bisikileta elektrikao? Raha tsy mipetraka any amin'ny toerana fisaka ianao arymanaomitaingina fohy, mety ho azonao izanymila fitaovana amin'ny bisikileta elektrikao. Raha ny ankamaroanyebikes mananaambaratonga isan-karazany amin'ny pedal manampy, maro ny mpitaingina mitazona ny azybisikiletaamin'ny PAS ambany (rafitra manampy pedal) miaraka amin'nyfitaovana.02.06.2020
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fividianana bisikileta elektrika?
Raha mitady torohevitra momba ny fomba hividianana e-bisikileta ianao dia tonga amin'ny toerana mety. Ny zavatra mampieritreritra indrindra momba ny e-bisikileta dia ny jargon, fa ny fandinihana izay dikan'izany sy ny fiantraikany eo amin'ny zavatra niainanao dia tena zava-dehibe. Ho an'ny vao manomboka, ny bisikileta mandeha amin'ny herinaratra dia misy motera sy bateria.
Mety ho bisikileta elektrika ve ny bisikilety?
Ny bisikileta an-tendrombohitra elektrika dia azo antoka fa tsara amin'ny lalana mitaingina sy mankeny amin'ny làlana. Fa aza manisa azy ireo eny an-dalambe koa. Ny bisikileta an-tendrombohitra elektrika amin'ny faran'ny farany ambany amin'ny vidiny dia afaka manao bisikileta elektrika tsara indrindra. Ny bisikileta toy izany dia mazàna dia sarotra, midika izany fa tsy misy fampiatoana any aoriana. Raha ny tokony ho izy dia matetika no manana fork fampiatoana eo aloha fotsiny.
Karazana bisikileta inona no tokony hovidiko amin'ny bisikiletako voalohany?
Raha mividy ny bisikiletanao voalohany ianao dia mety tsy snob e-bisikileta eny an-dalana - farafaharatsiny mbola tsy. Ary ny bisikileta toy ny recumbent, tandem, ary ny fomba hafa tsy dia fahita firy dia hosaronina amin'ny sokajy 'hafa'. Ny bisikileta an-tendrombohitra elektrika dia azo antoka fa tsara amin'ny lalana mitaingina sy mankeny amin'ny làlana.